Actress Charlize Theron wuxuu sharxayaa sababta ay uheshay wiilkeeda 7 gabar ah! - XIDHIIDHKA
ACCUEIL » DADKA & LIFESTYLE Actress Charlize Theron wuxuu sharxayaa sababta ay u baratay wiilkeeda 7-da oo la mid ah gabadh!
Charlize Theron oo ah haweenayda ugu caansan Mareykanka ayaa dib u soo celisay xilligii ilmaheeda, Jackson, oo da'deedu tahay 7, isaga u sheegay inuusan ilmo ahayn markii uu ahaa seddex sano oo kaliya.
Waxay ku jirtaa 2012 in Charlize Theron ay aqbasho Jackson, oo ah wiil, ka dib, 2015, xiddiggu wuxuu soo dhaweynayaa Agoosto yar. Maanta, waxay sheegtay in kor loo qaadayo " laba gabdhood oo qurux badan Tan iyo markii uu ka weynaa, 7 sano ka hor, ayaa naftiisa u sharaxay inuusan ahayn wiil.
Marka la eego mawduuca markii ugu horeysay, haweeney 43 waxay sheegtay in ay hadda rabto in ay "u dabaaldegto oo jeceshahay" labadeeda caruur ah sida ay yihiin.
Wareysi ay soo saartay Daily Mail, Charlize ayaa yiri: Waxaan sidoo kale u maleeyay in ay ahayd wiil, ilaa ay igu tiri, 'Ma ahay wiil!' da'da saddex jir Waxay u sheegtay Daily Mail markii ugu horeysay abid April 19. " Sidaas, taasi waa! Waxaan leeyahay laba gabdhood oo qurux badan oo aan rabo in aan ilaaliyo oo aan aragno sida waalid kale. Waxay ku dhasheen sida ay yihiin, mana aha aniga inaan go'aan ka gaaro halka ay ku dambeyn doonaan adduunyada koraya iyo cidda ay doonayaan inay noqdaan ", Faahfaahiyey awoowga sanadka 43 ee keligiis kor u qaada labadiisa carruur ah.
Charlize waxay bilowday qoys toddoba sano ka hor markii ay aqbashay Jackson kadibna martigelisay gabadh afartan jir ah oo magaceeda la yiraahdo August, oo ka timid hay'ad korsan oo Mareykan ah saddex sano ka dib.
Maqaalkani wuxuu u muuqday midka hore http://www.culturebene.com/50275-lactrice-charlize-theron-explique-pourquoi-elle-eduque-son-garcon-de-7-ans-comme-une-fille.html
Dick Rivers: heesaha ayaa geeriyooday maalintiisii ​​74